अनमोल केसी कति पढेका छन्, कति छ उनी संग सम्पति? – Tufan Media News
अनमोल केसी कति पढेका छन्, कति छ उनी संग सम्पति?
२ माघ २०७७, शुक्रबार २२:०४
काठमाडौ – अनमोल के सी नेपाली फिल्म जगतमा पछिल्लो पुस्ताका अत्याधिक चर्चित, व्यस्त र सबैभन्दा महँगा अभिनेता हुन् ।
उनको जन्म सन् ३० मार्च, १९९४, काठमाडौँमा भएको हो । उनी स्टार अभिनेता भूवन केसी र सुस्मिता बमजनका छोरा हुन् ।
उनले आफ्नो अध्ययन मल्टी इन्टरनेशनल कलेजबाट ए लेभलको पढाई पुरा गरेका हुन् । उनलाई घुम्न, म्युजिक सुन्न मनपर्छ । उनले अभिनय गरेका सुपरहिट फिल्महरु होस्टल, जेरी, ड्रिम्स, गाजलु, कृ, ऐ मेरो हजुर ३ क्याप्टेन हुन् ।
उनले पाएका अवार्डहरु,बेस्ट डेब्यु एक्टर २०१३, स्टार अफ दि इयर २०१६, पपुलर एक्टर अफ दि इयर २०१६, महा जुरी अवार्ड २०१६, एनएफडिसी बेस्ट एक्टर २०१८, डि सिने बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड २०१८ रहेका छन् । उनलाई मनपर्ने अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ हुन् । उनले ड्रागनका टाटु खोपाएका छन् ।
उनले कृ फिल्मका लागि २० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएका थिए । यसले गर्दा उनको स्टारडममा अर्को उचाइ थपिएको थियो । अनमोललाई प्राय घरभित्र नै बस्न मनपर्छ । उनी संगित रम्ने र फिल्महरु हेर्न रमाइलो मान्छन् । उनलाई नम्रता श्रेष्ठसँग काम गर्न मन छ ।